Folo taona niasana ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana eto Mahajanga | Région Boeny
Mbola mila fanentanana ny olom-pirenena sy ny olom-pitondrana amin’ny fahasahiana mitory ny raharaha ifanolanany amin’ny fanjakana aty amin’ny faritra. Mbola mibahan-toerana mantsy aty ny kolontsaina tsy mitory fanjakana, toe-javatra izay miteraka tsy fandrosona.
Izay no nasongadin’ireo mpizaika avy aty amin’ny faritra sy ireo vahiny mpiara-miasa amin’ny fanjakana malagasy nandritra ny fikaonandoha nanamarihana ny faha-10 taona nijoroan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana na Tribunal Administratif (T.A.) eto Mahajanga tao amin’ny hotely Fami Resort Amborovy.
Nandritra izay 10 taona izay dia antotan-taratasy fitoriana ny fanjakana miisa 501 no voarain’ny T.A. ary namoahany didy miisa 469. Ady tanim-panjakana tsy azo amidy no tena maro, ankoatr’izay ireo didy fampiantona sy fanapahan-kevitra navoakan’ireo Sampandraharam-panjakana aty amin’ny faritra ka nanaovan’olon-tsotra fanakianana.
Ny tanjon’ny T.A. dia ny fanajana ny foto-kevitra eto amin’ny tany sy ny firenena ary ny fanjakana tsara tantana, fanajana ny lalàna arakan’ny filamatry ny Repoblika faha IV ary mihaino ny hevitry ny olona ivelan’ny Fitsarana.
Fitaovana tsotra no niaingan’ny T.A. Mahajanga namakivaky izay 10 taona niasany izay nanomboka ny 17 septambra 2004 hoy Atoa Andriamiseza Charles, Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana nampatsiahy, ankehitriny efa anisan’ireo Fitsarana filamtra izy eo amin’ny fampandehanan-draharaha .
Marihina fa izao hetsika izao, izay notontosaina ny 28 Novambra 2014 dia fiaraha-miasan’ny T.A. amin’ireo vahiny avy ao Frantsa sy ny Association nationale pour la Justice administrative.